I-Nexus ayizukufumana i-Android P | I-Androidsis
I-Android P ayizukuza kwi-Nexus
UEder Ferreño | | Nexus, Iinguqulelo ze-Android
Inguqulelo yokuqala ye-Android P sele iphakathi kwethu. Usishiyile iindaba ezininzi, esiziqokeleleyo kweli nqaku. Kwakukho ulindelo olukhulu, kuba kwiiveki ezidlulileyo sele sifundile ngeminye yemisebenzi eza kubandakanywa yi-Android P Inoveli sele ibhengeziwe enokubaphoxa abaninzi.
Ngenxa yokuba inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle ayizukufikelela kwiNexus. Iifowuni ziya kuqhubeka nokufumana uhlaziyo lokhuseleko kude kube nguNovemba walo nyaka. Kodwa ngelishwa, abayi kuyifumana le nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Okwangoku Kuphela yiGoogle Pixel eyayinokufikelela kolu hlobo lwangaphambili lwe-Android P.. Kodwa kukhangeleka ngathi izakuhlala injalo. Ke le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza iya kuba yeyokuqala ehambelana neePixels. Ngaphandle kwamathandabuzo umzuzu obalulekileyo.
Kuba esi sigqibo sibonakala njengenyathelo elinye kwizicwangciso zikaGoogle zokushiya i-Nexus. Okwangoku azifumaneki kwiivenkile ezininzi. Ziyafumaneka kwezinye iiwebhusayithi, kodwa ngamaxabiso aphezulu kakhulu. Ke kubonakala ngathi inkampani ifuna ukugxila kwiiPixels.
Ngoko ke, Yonke into ibonisa ukuba uhlaziyo kwi-Android 8.1 Oreo iya kuba yeyokugqibela eza kufunyanwa yiNexus malunga noku. Kuba abayi kuba nakho ukonwabela i-Android P. Nangona baya kuba nohlaziyo oluyimfuneko lokhuseleko kude kube sekupheleni konyaka.
Sisigqibo esibalulekileyo kwaye abanye abasebenzisi basenokungasithandi. Kodwa, Kubonakala kusengqiqweni ukuba inkampani ikhethe ukugxila kwimizamo yayo kwiiPixels. Iifowuni apho onokonwaba khona kolu hlobo lokuqala lokujonga kuqala lwe-Android P. Ucinga ntoni ngesi sigqibo sikaGoogle?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » I-Android P ayizukuza kwi-Nexus
Ishedyuli yokukhutshwa kwe-Android P ityhiliwe
UXiaomi uza kuvula ivenkile yakhe entsha eMadrid ngo-Matshi 17